Microsoft Pix, wuxuu noo ogolaanayaa inaan sawirro kula qaadno iPhone-ka si xirfad ku dhow | Wararka IPhone
Sida Google oo kale, Microsoft waxay duulaan ku tahay barnaamijyada kala duwan ee moobiilka ee bixiya tiro badan oo codsiyo ah, laakiin si ka duwan Google, Microsoft waa inay diiradda saaraan laba dukaan oo kala duwan, ma ahan oo keliya mid ka mid ah kiiska Google. Wiilasha Redmond ayaa sii daayay a codsi cusub si sawirro fiican looga qaado iPhone-keena Iyadoo loo marayo barnaamijka Microsoft Pix, barnaamij cusub oo hadda yimid App Store oo noo oggolaanaya inaan sawirro ku qaadno qaab ka fudud, oo noo oggolaanaya inaan hadhow wax ka beddelno qabashada aan qaadnay.
Microsoft Pix waxay leedahay astaamaha laga filayo codsi kuu ogolaanaya inaad sawirro iyo fiidyow ka qaadatid, qalabka tafatirka, miirayaasha, wadaagista ... Si kastaba ha noqotee, codsigan wuu ka duwan yahay barnaamijyada kale ee sawirrada maxaa yeelay waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo baabi'inta sawirrada xun ee ka tagaya kuwa wanaagsan oo keliya tanna waxay ku wajahan tahay seddex dhinac: dadka meesha ugu horeysa, hagaajinta goobaha kamaradaha si ay uqabsadaan sawirka xaaladaha ugu wanaagsan waxayna noo ogolaaneysaa inaan sameysano fiidiyowyo yar yar marka dhaq dhaqaaqa lagu arko sawirka.
Waxyaabaha Microsoft Pix
Dejiyeyaal Smart ah oo si otomaatig ah u hubiya goobta iyo iftiiminta inta u dhexeysa tallaalada.
Aqoonsiga wajiga, hagaajinta qiyamka ugu wanaagsan si qofku / dadku u muuqdo sida ugu fiican.
Samee qaraxyo qabta daqiiqadaha qabashada ka hor iyo ka dib.
Mar kasta oo aan qabsanno, codsigu wuxuu na tusi doonaa saddex sawir oo kala duwan oo leh soo-bandhigyo kala duwan.
Dhaqaajinta sawirada, taas oo noo ogolaaneysa inaan abuurno fiidiyoowyo xiiso leh ka dib markii aan qaadno sawirro dillaacsan.
TimeLapse, oo noo oggolaaneysa inaan sawirro ka qaadno meel kasta oo u gaar ah, iyadoo la sameynayo fiidiyowgii ugu dambeeyay ee dhammaan qabashada.
Dhammaan sawirrada iyo fiidiyowyada si toos ah ayaa loogu keydiyaa liiska duubista ee iPhone-keena.
La wadaag hal-abuurkaaga si aan kala go 'lahayn saaxiibbadaa.
Microsoft Pix wuxuu kaliya taageeraa processor-yada 64-bit, taasi waa, laga bilaabo iPhone 5s wixii ka dambeeya, iPod taabashada jiilka 6aad, iPad Mini 2 wixii ka dambeeya, iPad Air 1/2 iyo iPad Pro. iPhone 4s, 5 / 5c, iPad 2/3/4, iPad Mini iyo iPod taabashada jiilka 5aad ma awoodi karo inuu rakibo arjiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Microsoft Pix, wuxuu noo ogolaanayaa inaan sawirro kula qaadno iPhone-ka qaab xirfad ahaan u dhow
Units Plus Beddel bilaash ah wakhti xaddidan